Zava-mahadomelina sy zava-mahadomelina ho an'ny lehilahy
Tena mahasoa ny kanelina ho an'ny lehilahy
Poster 12.07.2018 24.07.2018 fahasalamana, interesnenkoe
Ny cinnamon dia fofona manitra izay manome tsiron-tsakafo mahavoky tsy misy ala ho an'ny fofony manitra, mahatonga ny kafe maraina mientanentana bebe kokoa ary amin'ny ankapobeny dia mifandray amin'ny ririnina miaraka amin'ny divay matevina. Aza eritreretina anefa fa toy ny fetsy ny kanelina zava-manitra. Hitany fa ny spika atsinanana dia afaka mampivelatra ny fanandramana gastronomy fotsiny ihany, fa manampy ihany koa ny fahasamihafana amin'ny fiainana anaty.
Benefits of cinnamon for the body tsy azo lavina! Ary raha momba ny fahasalamana akaiky, ny fitsaboana any Orient dia mpanampy voajanahary tsara indrindra, izay mametraka olana tsy fahita firy ao am-pandriana mandritra ny fotoana fohy. "Tsotra!" dia hilaza aminareo hoe inona no mety hahatonga ny peninna penny: avy amin'ny fandresena ny dysfunile erectile amin'ny lehilahy alohan'ny hamerenana ny libido amin'ny vehivavy. Mendrika hanandramana izany!
Mampihena ny tsindry
Tsy tsiambaratelo fa ny fihanaky ny homamiadana dia mety hiteraka tsy fetezena amin'ny lehilahy sy ny tsy fahampiana ara-pananahana amin'ny vehivavy. Na izany aza, ny fifankahazoan-dresaka dia mety hiresaka, raha mahatsiaro ho reraka, reraka ary mihena ny fahalianana ara-pananahana.
Ny cinnamaldehyde tena mendri-piderana dia mampirisika ny vasodilasiona ary mampihena ny tsindrona arteria, mamerina ilay fiara fitadiavana firaisana. Dessert nasiana tsindrin-tsiranoka avy any ivelany, na labozia aromatika vitsivitsy miaraka amin'ny ravina vita amin'ny cannamon dia ho tsara ny manomboka amin'ny takariva iray mahafinaritra toy izany, ho hitanao.
Manome fifehezana hormones
Ny kanelina dia manampy amin'ny fampitomboana ny isan'ny progesterone ao amin'ny vatan'ny vehivavy, ka manalefaka ny fadimbolana mahatsiravina, mampitombo ny faniriana ara-nofo ary mampitombo ny fahafinaretan'ny fisakaizana.
Manamaivana herim-po sy aretina mitera-pahavoazana
Ny tsiron-tsakafo mafana sy malefaka ary mafana dia hampatanjaka kokoa noho ilay kafe mafy indrindra! Mampitombo ny asan'ny atidoha ny spice, manampy amin'ny fifantohana sy ny famporisihana ny tontolo fantasy. Ny menaka maitso avy amin'ny kanelina dia manome fahatsapana hafanana, manaisotra ny tebiteby ary miala tanteraka.
Cinnamon no "fo" amin'ny fiainanao akaiky.
Ny voka-dratsiny ao amin'ny zava-manitra, manatsara ny rafi-pandrefesana sy ny fitaovana tsara indrindra amin'ny fisorohana ny aretim-po. A salama fo, tahaka ny fantatrareo ihany - antoka ny toetra sy maharitra zhizni.K akaiky ny zava-manitra izany dia manampy mba hanatsarana ra mivezivezy ao ny fanaka, tsara tarehy fanesorana ny antsasaky ny maha-olombelona avy any amin'ny ratsy fated Marary Andoha Lava. Ry lehilahy, tadidio hoe: "oh, headache iray ..." dia tsy hiasa intsony!
Manitsy ny siramamy
Tokony ho ny antsasaky ny lehilahy sy ny ampahefatry ny vehivavy mijaly amin'ny diabeta dia mijaly noho ny olana eo anoloana akaiky. Diabeta dia afaka mampihatra ny ratsy tsirinaina vokany eo amin'ny lehilahy ho levitra mitarika ho amin'ny tsy fiterahana, na dia ny antsasaky ny olona matanjaka. Ny fandikana ny ran'ny vehivavy siramamy haavon'ny mety hiteraka mitsahatra amin'ny fananahana tany am-boalohany, ny firongatry ny olana amin'ny firaisana ara-nofo fiara, ary mety hahatonga ny tsy fifaliana ny akaiky blizosti.Mnogochislennye fanadihadiana dia nampiseho fa kanelina manampy ny ra izay hahamarin-toerana ary manampy siramamy haavon'ny nanorina ny fiainana akaiky. 1 tsp. Aritra ara-tsakafo isan'andro dia mety hanafoana ny olana amin'ny libido ary hampiakatra ny fiainam-pahafinaretana mankany amin'ny ambaratonga vaovao.
Manatsara ny rà
Ny fahafahan'ny zavamanitra manintona ny fampidiran-dra dia manome fahafahana hampitombo ny libido amin'ny vehivavy amin'ny fanatsarana ny fiterahana amin'ny fiterahana. Tsy misy faneriterena intsony ny faniriana hanao firaisana ara-nofo - ny sinema dia mendrika tsara eo amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo, manatsara ny fahatsapana ny erogenous hevitra ary mameno ny vatana amin'ny herin'olombelona.
← Ny tokony hatao amin'ny fahavaratra
Sakafo tsy fahita firy →